Semalt वेबसाइट डिजाइन र Seo
Semalt वेबसाइट डिजाइन र एसईओ
कोड Google लाई महत्व राख्दछ
एसईओ सुझाव अधिक गुगल मैत्री वेब डिजाइन
SEO भनेको किवर्डलाई रणनीतिक रूपमा राख्नु मात्र हो। तपाइँको वेबसाइट को डिजाइन तपाइँको SEO लाई असर गर्छ। त्यहाँ वास्तवमा कुनै एसईओ छैन कुञ्जी शब्दहरू बिना, तर Google ले तपाईंबाट बढि माग गर्दछ। तपाईको वेबसाइटको डिजाईन मात्र उपयोगकर्ता अनुकूल छैन तर सर्च इञ्जिन मैत्री पनि हुनुपर्दछ।
यदि तपाई प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तम वेब डिजाइन हुनु पहिले भन्दा अझ महत्वपूर्ण छ। अनलाइन सफलता पाउनुहोस्। एकै समयमा, तपाइँ पनि चाहानुहुन्छ कि यो SEO को अनुरूप हो। धेरै पटक, धेरै व्यक्ति एक अर्काको लागि बलिदान गर्छन्। तिनीहरू उत्कृष्ट डिजाईनको खर्चमा अन्य एसईओ प्रविधिहरूलाई समर्थन गर्दछन् जबकि अन्यले एक स्टाइलिश वेबसाइट बनाउन र आधारभूत एसईओ रणनीतिहरूलाई वेवास्ता गर्न धेरै प्रयास गर्छन्।
सन्तुलन भनेको कुञ्जी शव्द हो। यो अवस्था। तपाइँले कसरी सिक्नै पर्छ तपाइँको वेब डिजाईन अझ बढी खोज इञ्जिनका लागि अनुकूलित गर्ने जबकि अझै पनि स्टाइलिश र सौन्दरिक। हामी तपाइँलाई वेब डिजाइन दिनको लागि केहि सुझावहरू हेर्दै छौं जुन स्पेक्ट्रमको दुबै छेउमा सन्तुलन राख्छ।
हामीले ती सुझावहरूलाई हेर्नु अघि; यद्यपि तपाईको साइटमा प्रयोग गरिएका केहि कोडहरू हेरौं जुन गुगलका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्।
CODES MATTER that GOOGLE
त्यहाँ सम्पूर्ण कोडहरू छन् जुन गुगलका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। हामी केहिलाई हेरौं जुन तपाईले आज नै छिटो अद्यावधिक गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईको एसईओको लागि सहयोगी हुनेछ।
१। शीर्षक ट्यागहरू: तपाईं तिनीहरूलाई मेटा शीर्षकको रूपमा पनि जान्नुहुन्छ। ब्राउजरहरूले ट्याबहरू प्रयोग गर्न सुरू गर्नु अघि, केहि शब्दहरू जुन तपाईंको ब्राउजरको शीर्ष पट्टीमा देखिन प्रयोग गरियो - त्यो शीर्षक ट्याग हो। यो लामो समय सम्म देखाईएको छैन, तर तिनीहरू अझै पनि प्रासंगिक छन्। तिनीहरूले गुगललाई भन्दछन् कि यो तपाईले के अफर गरिरहनु भएको छ र त्यस्तै खोजी ईन्जिन नतीजाहरू पृष्ठहरू (SERPs) मा देखाइएको छ। त्यसोभए तपाइँको वेबपृष्ठ र पोष्टहरूको शीर्षक ट्याग सुधार गर्न यो तपाइँको समयको लायक छ।
एक राम्रो शीर्षक ट्यागले एक प्रसंग परिभाषित गर्न र तपाइँको साइटमा खोजीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्दछ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ शीर्षक ट्याग सिर्जना गर्नुहुन्छ जुन अद्वितीय हो र तपाइँको सामग्रीको एक सही वर्णन हो। यो 60० क्यारेक्टर मुनि राख्न निश्चित हुनुहोस् र तपाई जानु राम्रो हुन्छ। div> २। मेटा विवरण: तपाईं अझै मेटा ट्यागहरू र मेटा कुञ्जी शव्दहरूको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तथ्यहरूको सामना गरौं - मेटा वर्णनले तपाईंको SERP श्रेणीकरणमा कुनै प्रभाव पार्दैन। त्यसोभए तपाईंले तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्नुहुन्छ? त्यो ठूलो होईन। यद्यपि उनीहरूले SERPs मा तपाईंको स्थितिलाई प्रभाव पार्दैनन्, उनीहरूले राम्रोसँग CTR मा प्रभाव पार्दछ (क्लिक-थ्रु दरहरू)।
गुगलले यी विवरणहरूलाई स्निपेटको रूपमा प्रयोग गर्दछ। तपाईं त्यो पृष्ठमा प्रस्ताव गर्न के मा। तिनीहरू वास्तविक सम्झौताका टीज़रहरू जस्तै हुन्, त्यसोभए निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं उनीहरूको बाहिर ठूलो बिक्री पिच बनाउनुहुन्छ।
तिनीहरू शीर्षक ट्यागको साथ देखा पर्दछन्, र सँगै तिनीहरू उच्च क्लिक-थ्रु दर लागू गर्न सक्दछन्। मेटा विवरण औसतमा १ 150० अक्षरहरूको हुनुपर्दछ, र तिनीहरूले खोजी गर्न खोजेको समयमा उनीहरूले तपाइँका सेवाहरूबाट के चाहिन्छ भनेर केन्द्रित गर्नुपर्दछ।
।। H1, H2, H3 हेडर ट्यागहरू: यी ट्यागहरू खोजी ईन्जिन अनुकूलनको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छन जुन वेबपृष्ठ/पोष्टमा समावेश भएको सूचकको रूपमा सेवा गर्न मद्दत गर्दछ, प्रत्येक खण्डहरू र उपखंडहरू एक पटक तिनीहरूमा छन्। पृष्ठ।
पाठकहरूले यी ट्यागहरू प्रयोग गर्छन् तपाईंको सामग्री एक नजरमा के बारे मा छ बुझ्न। ती खोज ईन्जिनहरूले प्रसंग सूचकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। उनीहरूले Googlebot लाई पोष्टको सामग्री बताउँदछ, महत्त्वपूर्ण विषयहरू नोट गरिनुपर्दछ र यो कसरी तिनीहरूको खोजीमा प्रयोगकर्ताहरूको आशयसँग सम्बन्धित छ।
गुगलले केही ट्यागहरूको रूपमा लिन्छ अरू भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण। गुगलको क्रमबद्ध प्रणालीमा, H1 पहिले आउँछ, त्यसपछि H2, H3 र अगाडि। H1 मुख्य पृष्ठ हेडि or वा पृष्ठ/पोष्टको शीर्षकको रूपमा कार्य गर्दछ।
त्यसोभए, थम्बको नियमको रूपमा, H1 ले सामान्यतया पृष्ठको बारेमा बुझाउँछ। जबकि H2 त्यो पृष्ठको सेक्सनको बारेमा के हो। H3 ले तपाईंलाई भन्दछ कि त्यस पृष्ठको सेक्सन अन्तर्गत सबसन के हो र यस्तै अन्य। यसैले तिनीहरू गुगलको महत्वमा फरक हुन्छन्।
त्यहाँ अन्य धेरै कोडहरू छन् जुन गुगलसँग प्रासंगिक छ, तर केवल यीको लागि नोट लिनुहोस्। । र त्यहाँ केवल यति मात्र तपाईले आफ्नो व्यवसायको लागि गर्न सक्नुहुन्छ। किन तपाईं आफ्नो व्यवसायको अन्य पक्षहरूमा ध्यान दिनुहुन्न जब तपाईं Semalt मा SEO विशेषज्ञहरूको ट्याग र कोडहरूको चिन्ता गर्नुहुन्छ?
अब यसमा अगाडि बढौं ती सुझावहरू जुन हामीले माथि उल्लेख गर्यौं।
एसईओ सुझाव दिनुहुन्छ अधिक गुगल मित्रैलो वेब डिजाइन
१। Google वेब क्रॉलरहरूले पढ्न सक्ने सामग्रीको प्रयोग गर्नुहोस्: कुनै पनि वेबसाइटको ड्राइभि force सामग्री सामग्री हो, र ती Google TOP मा रैंकिंगको लागि सबै भन्दा महत्वपूर्ण कारकहरू हुन्। तपाईंको साइट डिजाईन गर्दा तपाईको सामग्री राम्रोसँग बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। हेडर, प्याराग्राफहरू, र लिंक उचित रूपमा प्रयोग गर्न नबिर्सनुहोस्।
धेरै सामग्री नभएको वेबसाइटहरू प्राय: SERPs मा कठिन समयको रैंकिंग हुन्छ। यदि उनीहरूले आफ्नो डिजाइन चरणमा सही योजना बनाए भने यो संघर्षलाई रोक्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि, पाठ प्रतिस्थापन गर्न छविहरूको प्रयोग नगर्न सकेसम्म प्रयास गर्नुहोस् जबसम्म तपाईं पृष्ठभूमि छवि पाठ प्रतिस्थापनको लागि प्रयोग गरिएको सीएसएस टेक्निकको प्रयोग गर्नुहुन्न।
२। तपाईंको साइट नेभिगेशन गुगल मैत्री हो भन्ने कुरा निश्चित गर्नुहोस्: यदि तपाईं गुगल क्रॉलरहरूको लागि फ्ल्यास वस्तुहरू पढ्नयोग्य बनाउने तरिका जान्नुहुन्न भने, यो तपाईंको एसईओको लागि दुखद कथा हुन सक्छ यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइटको नेविगेशन डिजाइन गर्न फ्ल्यास प्रयोग गर्न अगाडि जानुहुन्छ भने। । फ्ल्याश प्रयोग गर्ने वेबसाइटहरूले प्राय: खोजी ईन्जिनहरूलाई उनीहरूलाई क्रल गर्न गाह्रो समय दिन्छ।
धेरै जसो तपाईं फ्ल्यास प्रयोग गर्नुहुन्छ सौंदर्य कारणहरूले, किन विनीत जाभास्क्रिप्टको प्रयोग नगर्ने? र CSS जसले तपाइँको SEO लाई चोट नपुर्‍याईकन हेरिरहनु भएको उस्तै ठ्याक्कै प्रभावहरू दिन सक्दछ?
निश्चित गर्नुहोस् कि स्क्रिप्ट्स तपाईंको HTML कागजात बाहिर राखिएको छ: छिटो खोज इन्जिन तपाईंको साइटको सामग्रीमा पुग्न सक्दछ, उत्तम। अधिक कोडले तपाइँको साइटलाई क्रलिंगलाई ढिलो बनाउन सक्छ, र यसले तपाइँको खोज क्रमलाई असर गर्दछ।
गुगलले तपाईंको HTML कागजातको सामग्री तपाईंको साइट अवलोकन गर्न प्रयोग गर्दछ। यदि तपाईं आफ्नो जाभास्क्रिप्ट र सीएसएस कोडलाई बाह्यरूपमा गर्नुहुन्न भने, तपाईं बचाउन सकिने कोडका धेरै लाइनहरू थप्नुहुनेछ जुन तपाईंको मुख्य सामग्री भन्दा धेरै पटक अगाडि हुन्छ र खोजी ईन्जिनको लागि उनीहरूलाई कडा पार्ने बनाउँदछ। जाभास्क्रिप्ट र सीएसएसलाई बाह्य बनाउन सँधै प्रयास गर्नुहोस् जब तपाईं आफ्नो साइट कोड गर्दै हुनुहुन्छ।
4। पृष्ठहरू रोक्नुहोस् जुन तपाईं गुगललाई इन्डेक्स चाहनुहुन्न: तपाईंसँग तपाईंको वेबसाइटमा केहि पृष्ठहरू हुन सक्छन् जुन तपाईं खोजी ईन्जिनहरू तिनीहरूको अनुक्रमणिकामा थप्न चाहनुहुन्न। तिनीहरू पृष्ठहरू हुनसक्छन् जुन लगभग समान सामग्री समावेश गर्दछ।
उदाहरण को लागी, तपाईसँग e-वाणिज्य साइट छ र तपाईसँग बेच्न को लागी बिभिन्न रंगहरुको स्नीकर छ, तर तपाई प्रत्येकका लागि फरक पृष्ठहरू सिर्जना गर्नुहोस्। तपाइँको साइटमा स्नीकर्सको लागि अलग पृष्ठहरू बनाउनको लागि यो ठीक हुन सक्छ तर गुगलले नक्कल सामग्रीको कदर गर्दैन, वास्तवमा तपाईलाई यसको लागी दण्ड दिइनेछ। त्यसोभए तपाईले गर्न सक्ने उत्तम कुरा भनेको Google लाई यसको अनुक्रमणिका हुनबाट रोक्नु हो।
यस जस्तो अन्य पृष्ठहरू छन् जुन तपाईंको वेबसाइटमा कुनै वास्तविक मूल्य थप गर्दैन, जस्तै तपाईंको नयाँ वेब डिजाइनको लागि सर्वर साइड स्क्रिप्टहरू वा परीक्षण पृष्ठहरू। तिनीहरूलाई अनुक्रमणिकाले तपाईंको एसईओ रणनीतिहरूलाई चोट पुर्‍याउँछ। जरिवाना बेवास्ता गर्दछ, यी पृष्ठहरूले तपाईंको समग्र वेबसाइटको सामग्री घनत्व पातलो गर्दछ। ती पृष्ठहरूलाई अनुक्रमणिका हुनबाट रोक्न रोबोट.टक्स्ट फाइल प्रयोग गर्नुहोस्। अर्को चीज तपाईले गर्न सक्नु भनेको निर्माण पासवर्ड मुनिको पृष्ठ बनाउनु वा स्थानीय वेब विकास वातावरण प्रयोग गर्नु हो।
।। तपाईका यूआरएलहरू खोजी अनुकूल बनाउनुहोस्: खोजी-अनुकूल URL लाई क्रल गर्न गाह्रो हुनु हुँदैन। तपाईंको URL मा कुञ्जी शब्द हुनु पर्छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई त्यो पृष्ठमा के हुन्छ भनेर बताउँदछ। तपाइँको यूआरएलहरू यस्तो देखिन्छन् भन्ने बेवास्ता गर्नुहोस्:
बरु, प्रयास गर्नुहोस् र URL को लागि जानुहोस् जुन यी जस्तो देखिन्छ:
URL को लागि स्वचालित रूपमा उत्पन्न कोड र नम्बरहरूको प्रयोग गर्ने सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीबाट सावधान हुनुहोस्। राम्रो CMS ले तपाइँलाई तपाइँको साइट URL हरू लाई अनुकूलित गर्न विकल्प दिनुपर्दछ।
।। राम्रो डिजाईन र यूएक्स को लागी जानुहोस्: गुगल सधैं आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुलाई उत्तम दिन चाहन्छ र कुञ्जीशब्दहरु र सामग्री मा निर्भर गर्दछ कि न्याय हुँदैन। त्यसकारण निश्चित संकेतकहरूको उनीहरूको उपयोग जस्तै बाउन्स रेट र साइटमा खर्च गरिएको समय।
यदि एक प्रयोगकर्ताले खोज परिणाम पृष्ठबाट तपाइँको साइटमा क्लिक गर्दछ र पछाडि बटन धेरै छिटो (बाउन्स) मा हिर्काउँछ, जसले गुगललाई भन्छ कि प्रयोगकर्ता मनपर्दैन। तपाइँको वेबसाइट र तिनीहरूले तपाइँको साइट शीर्ष-रैंकिंग पृष्ठमा ल्याउन को लागी कोशिश गर्दैनन्।
यदि प्रयोगकर्ताले तुरून्त पछाडि बटन थिचेन तर तपाईंको पृष्ठमा पर्याप्त समय खर्च गर्दैन भने, गुगलले यसलाई प्रयोगकर्ताले नभएको भन्ने बुझ्दछ सन्तुष्ट र यसैले आफ्नो साइट समयमै छोड्नुपर्‍यो।
साथै, यदि तपाईंले आफ्नो वेबसाइटको डिजाइन र यूएक्स सुधार गरियो , तपाईंको" बाउन्स रेट "घट्नेछ र तपाइँको" साइटमा समय "बढ्नेछ, अन्ततः तपाइँको एसईओ लाई बढावा दिँदै। आश्चर्यजनक Semalt वेब डिजाइन टोलीलाई तपाईंको अर्को वेब डिजाइन ह्यान्डल गर्न दिनुहोस् र खुशी हुनुहोस् कि तपाईंले उनीहरूलाई प्रयास गर्नुभयो।
तपाईको वेबसाइटको डिजाईनले तपाईंको एसईओ प्रदर्शनमा महत्त्वपूर्ण असर पार्दछ। यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले आफ्नो साइटको डिजाइनमा यस लेखमा छलफल गरिएको सल्लाहहरूको राम्रो प्रयोग गर्नुहुनेछ र तपाईको एसईओमा ठूलो सुधार देख्नुहुनेछ।